Eva xumbo, Eva Yoga Wheel, Die Going - Parkway xumbo
Taleefannada gacanta ee Smart Phone
Suunka Suunka Dhexda
Taas oo ku habboon warshadaha baabuurta, dahaarka baakadaha, farsamada shoogga iyo warshadaha kale.
Xumbada NBR waxay leedahay dib-u-dhac olol wanaagsan iyo daboolida guryaha, taas oo ku habboon warshad kasta oo aad ka fikiri karto.
Alaabooyinka waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa tareenka xawaaraha sare leh, baabuurta, warshadaha iyo warshadaha dhismaha.
Shirkadeenu waxay leedahay tiro badan oo ah qalabka xumbada iyo qalabka wax soo saarka. Kalsooni badan ayey ku noqon kartaa inay macaamiisha siiso noocyo kala duwan oo xalka xalka dalabka badeecada.
Si ballaaran ayaa loogu isticmaalay baabuurta, dhismaha, baakadaha, alaabada isboortiga iyo warshadaha kale.
Neoprene, sidoo kale loo yaqaan CR xumbo. Waxaa si khaas ah loogu soo saaray inay ahaato caag isbonji ah oo jilicsan, dabacsan oo neefsan kara.
FAA'IIDOOYINKA, QIIMAHA IYO ADEEGYADA
Maaddaama aan ahay soo saare xirfadle ah oo ku takhasusay soo saarista waraaqaha xumbada iyo xumbada u beddelashada, waxaan leenahay mashiinno kala duwan oo farsameeya xumbada si loogu qanco dalabaadka macaamiisha ka kala socda warshadaha kala duwan. In ka badan 20 sano oo khibrad wax soo saar xumbo ah, waxay noo suurta gelineysaa inaan siino alaab tayo sare leh iyo adeeg qanacsan macaamiisheenna.
Parkway xumbo Co., Ltd. waxaa la aasaasay 2001 waxayna ku taal Changzhou. Warshaddu waxay ku fadhidaa aag dhan 10, 000 oo mitir murabac ah oo awoodda wax soo saar sanadle ah waa 30, 000 mitir cubic. Waa shirkad ku takhasustay soo saarista xaashiyo caag ah oo xunbo ah (Xumbo EVA, xumbo PE, neoprene / CR, xumbo EPDM) iyo beddelaad xumbo (laminating, cut cut, cuting, xardho, iwm) soosaarayaasha.
Khibrad wax soo saar hodan ah Qalab kala duwan oo wax lagu farsameeyo Habee alaabooyinka iyadoo loo eegayo baahida macaamiisha Qiimo badan iyo faa'iidooyin adeeg
Khibrad wax soo saar hodan ah
Shirkadeenu waxay leedahay taariikh 16 sano ah, waxayna leedahay koox farsamo khibrad leh iyo koox khibrad u leh iibka
Qalab kala duwan oo wax lagu farsameeyo
Waxaan ururinay mashiinno iyo qalab loogu talagalay soo saarista noocyo kala duwan oo ah waxyaabaha xumbada si loo daboolo baahiyaha kala duwan ee macaamiisheena
Habee alaabooyinka iyadoo loo eegayo baahida macaamiisha
Waxaan u qaabeyn doonaa adeegyada iyo alaabada ay u baahan yihiin mid mid iyadoo loo eegayo baahiyaha kala duwan ee macaamiisha kala duwan. Halkii si fudud loo iibin lahaa alaabada caadiga ah.
Qiimo badan iyo faa'iidooyin adeeg
Marka la barbar dhigo ganacsatada iyo dillaaliinta, warshad ahaan, waxaan si toos ah u siin karnaa macaamiisha qiimaha ugu jaban, laakiin isla mar ahaantaana, waxaan si gaar ah u sameynay koox u dhiganta shirkadaha ganacsiga ajaanibta ah ee Macaamiisha.
Carwada Qaybaha Gawaarida
Bandhigga xumbada xumbada Aasiyaanka ah
Bariga Ganacsiga Dibadda Shiinaha Boqol Guuto ...
Cinwaanka: No.115 Caoshangcun Road, Qishuyan Street, Degmada Wujin, Changzhou City Jiangsu Gobolka Shiinaha 213000
Right Copyright - 2019-2020: Dhamaan Reserved Rights. Talooyin - Alaabada Kulul - Khariidadda bogga
Laabista Kaambada Laablaab, Bacda Dhexda, Isku-xarka Xpe Xerada, Bannaanka Isku laabma Xpe Camping Mat, Suunka dhexda oo socda, Suunka Biyoodka,